Aubergines waxaa lagu shubay tuunis la dubay, oo hodan ah oo fudud. | Cunnooyinka jikada
Tuna dubay aubergines cufan
Montse Morote | 27/05/2021 09:00 | Galitaanno Kulul, Bilowga Qabow, Cunnooyinka khudradda
Tuna dubay aubergines cufan, Cunto fudud, qaab kale oo loo cuno aubergines. Beedka ukunta ayaa ah mid aad u caafimaad qaba, waa qudaar siyaabo badan loo kariyo iyo waxyaabo fara badan oo la buuxiyo.
Maanta waxaan kuu soo jeedinayaa xoogaa aubergines ah oo lagu buuxiyey tuna, hodan ah oo si sahlan loo diyaarin karo, ku habboon xagaaga, oo ay ku jiraan maaddooyinka ay qoyska oo dhami jecel yihiin.
Waad sameyn kartaa noocyo kale oo ka mid ah isla qaab isku-darka ah, waxaad ugu mahadcelin kartaa béchamel iyo jiiska jiiska ah, ku shub majones halkii aad ka heli lahayd béchamel, si kastaba way u macaan yihiin. Waxa kale oo aad ku samayn kartaa isku-darka kale tuunada oo waxaad dhigtaa khudaar sida basasha la shiilay oo aad u wanaagsan
Waqtiga karinta: 40 m
Wadarta waqtiga: 55 m
3-4 gasac oo tuna ah
200 gr. yaanyo la shiilay
100 gr. jiis jiis
Si loo diyaariyo aubergines-ka lagu duubay tuna la dubay, waxaan ku bilaabi doonnaa anaga oo shidaneyna solayga foornada.
Waxaan ukunta u dhignay inay ku kariyaan digsi biyo ku jira, waxaan uga tagnaa 10 daqiiqo markay bilaabaan inay karsadaan. Marka ukunku diyaar yihiin, ka saar, ha qaboojiyo, diirka ka dhiga oo keyd ha.
Aubergines-ka waan kala goyn doonnaa qeyb ahaan, waxaan siin doonnaa xoogaa yareyn ah iyo xoogaa saliid ah, waxaan ku ridi doonaa foornada illaa ay ka dubtaan.
Markay auberginesyadu jiraan, waan soo bixinnaa iyaga oo kaashanaya qaaddo ayaan ka soo saaraynaa hilibka aubergines-ka, annaga oo ka taxaddarayna inaysan jebin.
Waxaan jarjaraynaa hilibka geedka ukunta, waxaan geynay ilo.
Kudar qasacadaha tuna, ku qas aubergine.
Fiiq oo jar ukunta adag ee la kariyey qaybo, ku dar isku darka hore.
Waxaan ku darnaa yaanyada la shiilay, qadarka dhadhanka, wax walba si aad u wanaagsan ayaan isugu darnaa.
Waxaan geynay aubergines il, ku buuxi buuxinta aan diyaarinay.
Waxaan ku dabooleynaa aubergines jiiska jiiska ah.
Aubergines-ka ayaan ku shubnay foornada si ay ugu xoqdo.
Markuu farmaajo jiro, waan soo bixinaa oo u adeegnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Asxaabta » Galitaanno Kulul » Tuna dubay aubergines cufan
Burucda karootada microwaved